Ubuhle kunye nempilo Ukunyamekela umzimba
Ukuphatha kakuhle nokulungelelaniswa kwempahla enye yezimfihlelo zempumelelo yabasetyhini. Kodwa thina, ngelishwa, asikho abafazi be-muslin kwiiglavu ze-silk, kwaye imihla ngemihla sifanele sijongane nemibandela enobudlova: amanzi anzima, umoya obandayo, i-alkali, uthuli. Ulusu luba lumile kwaye ludibene, kwaye i-marigolds idiliza yonke into ngoku. Ngaba akusixesha lokuba uthathe umgaqo wokuzibamba iiveki ezimbini kwiiveki ezimbini ezilungileyo kakhulu?
Ngokuqinisekileyo, oku kungumgubo womzimba, kodwa akusiyo into esajwayele ngayo. Inkqubo entsha kwi-cosmetology yinkqubo ye-spa, kwaye abazange baphephe ukucoca komzimba.
Mhle kwaye luncedo
Inqubo ye-spa iquka ukusetyenziswa kwezihluma kunye neebhafu kunye nokudibanisa kwamafutha anamnandi, izityalo zonyango, ityuwa yolwandle kunye nezinye izondlo. Ngokomzekelo, iziyobisi eziqukethe i-ceramide - i-lipid i-compid, efuna isikhumba esomileyo. Zinomphumela wokuvuselela kunye nokunyusa, ubuyele ukunyaniseka kwesikhumba sezandla.
Iimithi zonyango zinefuthe lokuxhatshazwa, ziphulukisa indawo kunye nephulo elitshitshiswayo kunye namanxeba. Ulwandle lutyuwa ludambisa ulusu, luqinisa izipikili. Yaye i-oyile ebalulekileyo ayiphakamisi nje i-mood kwaye ihlaziye inkqubo ye-nervous, kodwa iphinde ichaze i-bactericidal kunye ne-anti-inflammatory properties. Zonke izixhobo ezisetyenziswa kwi-spa-manicure, zinika imiphumo emihle kakhulu, kunye nenkqubo ngokwalo yenza kube lula ukuba abe njengendlovukazi yangempela.
Musa ukuya kude
Akusiwo wonke umntu onokukwazi ukufumana umququzeleli wobugcisa ngeveki. Kufuneka sikwenze ngokwayo: isiqwenga, iifayile zeedilesi, i-spatula ... kwaye ukuba kungenako uvila kwaye ungeze izithako ezingentla ngasentla kumiselwe, uya kufumana iseshoni yokuqhawulwa kwama-Spa angakulibaleki. Siza kuzama?
iintyatyambo ze-chamomile okanye i-marigold, amaqabunga ama-mint, i-oak bark - ukukhetha kuyo;
ukukhahlela kunye nokusipha ngesandla;
umbane wokususa i-varnish;
Ngethuba lokuqala oko kuya kuba ngokwaneleyo. Ngoku uye ngqo ngqo kwinkqubo yokucoca umzimba kwi-spa.
Susa i-varnish endala esuka kwi-marigold.
Nangona iipsisi zomile, zinike umxholo ofunwayo. I-marigolds ephazamisekileyo ayinakunikwa, mhlawumbi iza kuqala ukuhlukana.
Lungisa i-tub: amanzi afudumeleyo + amayeza omnyoli + amafutha abalulekileyo + elwandle ityuwa. Unako ukongeza ngaphezulu kunye ne-antifungal.
Beka izandla zakho kwi-tub, vala amehlo akho, uphumule uze ucinge ngento entle. Kuya kuthatha imizuzu emi-5-7.
Vula amehlo akho, umomotheka kwaye uthabathe izibambo ngelawula.
Ngokunyuka kwe-massage ukuhamba, sebenzisa ukutshiza kwesikhumba sezandla zakho. Bamba umkhiqizo ezandleni zakho de uze utywe kwaye uqale ukugxotha.
Susa i-asele ngamathambo.
Faka i-mask ngesandla kwizandla. Cinga ngokucacileyo ukuba ulusu ludla njani izinto ezincedo kwaye luba luphilile kwaye lube lukhulu emehlweni.
Geza imaski emva kwemizuzu eyi-15 ngamanzi afudumele kwaye usebenzise umququzeleli kwiindawo zokuphatha. Ngendlela, ingatshintshwa ubisi obondla okanye ioli efunekayo.
Gubungula iiphonkco kunye ne-agent agent. Smile kwaye uvavanye umphumo!
Njengoko ubona, iteknoloji ye-spa manicure iyinto elula, into ephambili ayiyi kuba lithembe kakhulu kwaye yabelwe isithandwa sakho isiqingatha seyure!
Ngaphambi kokuba uyenze ukucoca umzimba, qwa lasela iingqinisiso. Le nkqubo enqwenelekayo, ngelishwa, ayimkelekile kubantu abahlukunyezwa nemivilini ye-varicose, isifo sikashukela, i-hypertension kunye nezifo ezithintekayo. Kufuneka ubaleke kunye ne-spa manicure ukuba kukho amanxeba, ukutyantya, ukutshisa, ukukhwadana okanye ukugqithisa kwesikhumba sezandla.
Iqumrhu lihlutha ngekhofi
Ikhumba elomileyo kwizandla nangeenyawo-ezibangela
Indlela yokwenza i-manicure ekhaya?
I-Mycosis yezikhonkwane kwimilenze - unyango
Amabala amhlophe ekhumbeni emva kokushisa kwelanga
Ukususwa kwesikhonkwane esingumngcipheko nge laser
Ngaba ndinokutshisa ilanga kwi-salon yokucwenga ngaphandle kokhilimu?
Ukuchaneka njani ukutshisa ilanga kwindawo yokukhanya kwelanga?
Ukuzilolonga ngentambo yokulahleka kwesisindo
Izambatho eziphathekayo zokugqiba
I-TOP-25 ezininzi iinkati ezingavamile kwihlabathi
Amakhandlela eViburcal wokukhulelwa
Ukunyanga kotywala ngaphandle kokwazi isigulane
Quincke edema kubantwana
I-Voodoo doll - njani ukwenza izandla zakho nendlela yokuyilawula?
I-Eyebrow tattoo - indlela yeenwele
Umama kwiipilisi - isicelo
I-Watermelon yokulahleka kwesisindo
Kunceda kangakanani i-kvas kunye neziphi izifo?
Iifotyi, luncedo kuwo wonke umntu
Ubungqina bokuba kukho uvuyo
Ubungqina obuchanileyo kwixesha elizayo